Fahatsiarovana momba ny tantaram-pitiavan'i Jordana Pickford momba ny tantaram-pitiavana
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Fahatsiarovana momba ny tantaram-pitiavan'i Jordana Pickford momba ny tantaram-pitiavana
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Picky". Ny rakitsary momba ny tantaram-pianakavian'i Jordan Pickford momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fiakarany amin'ny maha-fitaovam-piadiana azy amin'ny maha-fitaovam-piadiana voalohany an'i Angletera, saingy vitsy no mihevitra ny biography of Jordan Pickford izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Jordana Lee Pickford dia teraka tamin'ny andro 7 tamin'ny 1994 tamin'ny volana marsa tany Washington, Royaume-Uni. Teraka tamin'ny reniny, Sue Pickford (mpanampy trano) ary i Lee Pickford rainy (mpanorina).
Ny tantaran'ilay fiara fitateran'i Washington dia miresaka momba ny fisondrotany tahaka ny fanangonam-boa-maso eo amin'ny valo, manomboka amin'ny ekipa voalohany sy ny sisa.
Niorina tany Saint Robert avy amin'ny Sekoly Katolika Newminster i Pickford. Tao an-tsekoly, liana tamin'ny nilalao baolina kitra izy, ny maha-mpiambina azy indrindra no tena izy satria izy no avo indrindra tamin'ireo taona 8 rehetra izay navotsotra noho ny haavony. Taorian'ny nilalaovany ny toeran'ny baolina kitra nandritra ny ekipan'ny ekipany, dia nanapa-kevitra ny hisoratra anarana ny ray aman-dreniny hisoratra anarana ao amin'ny Akademia Sunderland raha mbola ao anatin'ny taona 8 izy.
"Rehefa mijery ireo ankizy valo taona ianao rehefa mandinika ny halavany. Hahafantatra ianao fa atletika, haingana, fa tsy ny rehetra no manorina ny marina - Jordan Pickford dia ireo zavatra rehetra ireo.
Rehefa fantany fa efa nofenoina ireo safidy Goalkeeping, dia naniry ny handefa azy ny akademian'ny tanora. Nanana fihetseham-po ratsy izy ireo noho ny taonany. Tsy sahy nanafaka azy izy ireo. Na izany aza, tsy natahotra i Pickford. Nirotsaka hindramina enina izy. Ireo sarany dia sarotra sy tsy afa-mihetsika fa nanampy ny namadika ilay zazalahy kely tamin'ny lehilahy.
Miasa amin'ny olona tsara i Pickford na aiza na aiza izy ary mandroso amin'ny taranja taranja taranja taranja. Ny mifanohitra amin'izany kosa, tamin'ny fotoana nandraisan'i Pickford ny lahateniny Sunderland dia efa nanana ny lalao ekipa voalohany ekipa 100 izy. "Rehefa mijery ny tian'ny David James or David tantsambo, zazalahy kely izy ireo ary tamin'ny fotoana naha 20 na 21 azy ireo, nilalao zavatra toy ny lalao 100 izy ireo, " hoy i Prudhoe, mpilalao tanora tao Pickford.
Tao amin'ny 2011, nanao sonia ny fifanarahana ara-barotra voalohany tamin'ny klioba i Pickford. Nandroso tamin'ny asa aman-draharahany izy, ary matetika izy no nampiasain'i Phil Barnes, izay naratra. Nianatra ny fahaiza-manaony izy hitazona ireo taratasy madio.
Ny rakitra madio dia nanosika an'i Everton izay tamin'ny andron'ny 15 andro of June 2017, dia nanao sonia azy nandritra ny fifanarahana dimy taona. Ny volany voalohany eo amin'ny £ 30 tapitrisa noho ny fanampim-panazavana, ka mahatonga azy ho ilay mpiandry lafo fahatelo indrindra amin'ny tantara ary ilay mpiambina britanika goavana indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Pickford dia niaraka tamin'i Megan Davison amam-pitiavany hatramin'ny fahazazany 14 ary nifindra tany Liverpool niaraka taminy izy raha niditra tao Everton.
Megan, izay mamaritra azy matetika "Bae" Ao amin'ny Instagram, mijoro foana amin'ny lehilahy. Anjerimanontolony nahazo diplaoma ambony faharoa izy. Samy tia ny fialantsasatra tsy tapaka manerana an'izao tontolo izao ireo mpankafy, indrindra ireo Bahamas.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana manokana
I Jordana Pickford dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny tanjaky ny Jordania: Ny fangorahana, ny artista, ny saina, ny hendry, ny hendry, ary ny mozika
Ny fahalemen'i Jordania: Matahotra, matoky tena, malahelo, maniry ny handositra ny zava-misy, mety ho lasibatra na maritiora
Inona no tian'i Jordan: Ny maha-irery, ny torimaso, ny mozika, ny romance, ny haino aman-jery an-tsary, ny milomano, ny ara-panahy
Inona no tsy tia an'i Jordania: Ireo izay milaza azy ho fantany-izany-ny rehetra, voatsikera, ny lasa dia niverina hangeja azy sy ny halozàna rehetra
Tena faly i Jordan ary feno fifaliana sy fihomehezana. Noho izany dia matetika izy no mihaona amin'ny olona marobe. Tsy tia tena i Jordania, vonona ny hanampy ny hafa foana izy, ary tsy manantena ny hahazo zavatra hafa.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Avy amin'i Britney Jordan avy amin'ny antokom-pinoana Britanika midadasika. Ny tatitra vao haingana dia mampiseho ny fiaviany lalina avy any Azia, noho izany antony izany ny anarana Lee.
Nifidy an'i akoho sy pasta nomanin'ny reniny foana i Jordania. Ny iray amin'ireo fahatsiarovan-tena faran'izay mafy indrindra amin'ny fianakaviany dia midika fa ao ambadiky ny fiara an'ny ray aman-dreniny, mankany amin'ny toerana tsy ligy, miaraka amin'ny sakafo (Chicken & Pasta) eo anilany. Amin'ny teniny ...
'Nandeha tany Alfreton aho mba hilalao lalao ary i Lee, dadako dia hitondra, ' hoy i Pickford.
Nitohy izy ... 'Nihinana ny sakafo matsiro teo alohany aho. Ny mamanay manamboatra akoho sy pasta ary hifikitra izany ao anaty siny. Tsy azoko antoka fa tena matihanina izy fa raha mbola teo am-pelatanan'ny lehilahy ny lalao dia marina izany!. Ny zavatra hafa dia miova ho ahy samedi. Ny reniko, Sue, dia nitondra ahy hiofana fiarakaretsaka rehefa izaho dia zazakely. Izany no mitranga rehefa rain'ny raiko ny asabotsy maraina. "
rahalahy: Ny rahalahiny, Richard Pickford no ilay nametraka azy teny an-dàlana ho lasa mpiandry tsatokazo. Samy niara-nilalao baolina izy ireo tamin'ny fotoana naha ankizy azy. Indrisy, Richard dia tsy nanao izany mihitsy. Ny traikefa nampalahelo teo amin'ny lalao matihanina dia nanosika ny fanapahan-kevitry ny zandriny hanatanteraka ny tanjony amin'ny fiakarany mankany an-tampony ary hanao ny mpanazatra an'i Angletera Gareth Southgate Mahatsiaro azy.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Faly ny ray aman-dreny ho antso
Rehefa nantsoina ho eny amin'ny ekipa zokiny i Pickford taorian'ny nandraisan'i Tom Heaton an'i Burnley naratra teo amin'ny fiofanana mialoha ny fifanintsanana tamin'ny mondialy tamin'ny Sloveny. Izany dia nitarika ny nofin'i England Call.
Ny tantara nataon'i Pickford momba ity tantara ity dia izao manaraka izao; "Niditra an-tranomaizina ny dadako sy ny dadako aho rehefa notantaraina tamin'ny finday hoe: 'Nantsoina ianao, nidina haingana araka izay tratra'. Niposaka aho. Hoy aho hoe, 'Mam, handeha miaraka amin'i Angletera aho, midina aho izao, niantso an-tariby fotsiny aho'.
"Nandeha izy, 'Tsy ianao no tsy' - noheveriny fa nanofahofa azy aho, ho mpankafy indray! Fotoana fohy ihany no nandevenana fa ny fanatrehana ireo alina roa ireo miaraka amin'ireo mpilalao tsara indrindra ao amin'ny firenena dia efa niaina fianarana goavana. "
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Jordan Pickford momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Theo Walcott tantaran-tantaran'ny tantaram-piainana tsy hita isa